अपवर्तक शल्यक्रिया के हो | बेजिया
टोय टोरेस | 13/05/2022 14:00 | स्वास्थ्य सल्लाहहरू, रोगहरू
केही वर्षदेखि, दृष्टि समस्या भएका मानिसहरूले रिसोर्ट गर्न सक्षम छन् तिनीहरूलाई सच्याउन र चश्मा वा कन्ट्याक्ट लेन्सहरू सदाको लागि हटाउन अपवर्तक शल्यक्रिया। अपवर्तक शल्यक्रियामा हस्तक्षेप वा सर्जिकल प्रविधिहरूको समूह समावेश हुन्छ जसद्वारा दृष्टि परिवर्तनहरू निम्त्याउने निश्चित समस्याहरू सच्याइन्छ वा हटाइन्छ। उदाहरणका लागि, मायोपिया, दृष्टिवैषम्य, हाइपरोपिया र आज पनि प्रेस्बायोपिया पनि सच्याउन सकिन्छ।
चश्मा लगाउन रोक्न चाहने, चाहने वा चाहिने व्यक्तिहरूको लागि पूर्ण मद्दत, या त व्यावसायिक, खेलकुद वा केवल सौन्दर्य कारणहरूको लागि। किनभने चश्मा एक धेरै राम्रो, रमाईलो सहायक उपकरण हो जसले अनुहारमा व्यक्तित्व पनि थप्छ, तर हामी सबैको लागि जसले तिनीहरूलाई हरेक दिन लगाउनै पर्छ, तिनीहरू तिनीहरू बिना, हामी हराएको सम्झना बाहेक अरू केही होइन।
1 अपवर्तक शल्यक्रिया
1.1 लेजर अपवर्तक शल्यक्रिया, LASIK वा PKR
1.2 इन्ट्राओकुलर लेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
1.3 म शल्यक्रिया गर्न सक्छु भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
सुधार गर्न अपवर्तक शल्यक्रियाका विभिन्न प्रकारहरू छन् दृष्टि समस्याहरु। प्रत्येक अवस्थामा, यो विशेषज्ञ हुनेछ जसले निर्धारण गर्दछ कि कुन सबैभन्दा उपयुक्त छ र एक भन्दा बढी प्रविधि एकै व्यक्तिमा एकै समयमा लागू गर्न सकिन्छ। अर्को हामी तपाईलाई बताउँछौं अपवर्तक शल्यक्रिया को प्रकार के हो, तिनीहरू कहिले प्रयोग गरिन्छ र कसरी प्रविधि प्रदर्शन गरिन्छ।
लेजर अपवर्तक शल्यक्रिया, LASIK वा PKR
जब लेजर आँखाको परिवर्तनहरू सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले दृष्टि समस्याहरू निम्त्याउँछ, यसको बारेमा के हो कोर्नियाको आकार परिमार्जन गर्नु हो ताकि सही दृष्टि रोक्न डायप्टरहरू सच्याउन सकिन्छ। आकार स्नातक आधारमा फरक हुन सक्छ प्रत्येक बिरामीको, उदाहरणका लागि, जब LASIK प्रविधि प्रयोग गरिन्छ, निम्न हस्तक्षेपहरू प्रदर्शन गरिन्छ।
मायोपिया सुधार गर्न: के गरिन्छ लेजरको साथ वक्रता समतल गर्न, त्यसैले प्रकाश सही रूपमा कोर्नियामा केन्द्रित छ।
को मामला मा हाइपरोपिया: यस अवस्थामा, कोर्नियाको किनाराहरूलाई घुमाउरो बनाउनको लागि मोल्ड गरिन्छ।
दृष्टिवैषम्यको लागि, के गरिन्छ कोर्नियाको सबैभन्दा ठूलो वक्र भएको क्षेत्रलाई सकेसम्म समान रूपमा छोड्न समतल गर्न।
तथाकथित PKR अपवर्तक शल्यक्रियाको अवस्थामा, प्रविधि यो समान छ तर यो सामान्यतया रोगी को लागी अधिक कष्टप्रद छ। यो दृष्टि समस्याहरू सुधार गर्न प्रयोग गरिएको पहिलो प्रविधि थियो, त्यसैले आज यो धेरै सुधारिएको छ र त्यसैले अब बारम्बार प्रयोग गरिँदैन।
इन्ट्राओकुलर लेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
केही अवस्थामा, कोर्निया परिमार्जन गर्न र दृष्टि सुधार गर्न लेजर प्रयोग गर्नुको सट्टा, प्रत्येक बिरामीको आवश्यकता अनुसार, लेन्स प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ वा लेन्स हटाउन सकिन्छ। यो प्रविधि हो जुन सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ जब बिरामीसँग अनुमति भन्दा बढी डायप्टरहरू छन् अपवर्तक लेजर शल्यक्रिया गर्न। लेन्स प्रत्यारोपण को मामला मा, लेन्स राखिएको छ। अन्य अवस्थामा, लेन्स हटाइन्छ र एक अफाकिक लेन्स प्रत्यारोपण गरिन्छ, जुन मोतीबिन्दु हटाउन प्रयोग गरिने प्रविधि हो।
म शल्यक्रिया गर्न सक्छु भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
मायोपिया, दृष्टिदोष वा हाइपरोपिया जस्ता दृष्टि दोषहरू सच्याउन आवश्यक परेको अवस्थामा अपवर्तक शल्यक्रिया गर्न सक्षम हुन, बिरामीले निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ। एकातिर, स्नातक कम्तिमा दुई वर्षको लागि स्थिर हुनुपर्छ। प्रत्येक मामिलामा विशेषज्ञ द्वारा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने अन्य सुरक्षा मापदण्डहरू पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ।
तपाइँका सबै शंकाहरू समाधान गर्ने उत्तम तरिका भनेको एक विशेषज्ञको परामर्शमा जानु हो जसले समीक्षा गर्न र तपाइँका विकल्पहरू व्याख्या गर्न सक्छ। किनकि त्यहाँ धेरै मापदण्डहरू छन् जुन प्रत्येक केसमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, प्रत्येक बिरामीको आवश्यकता र इच्छित परिणाम प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि प्रत्येक अवस्थामा फरक हुन सक्छ। यसबाहेक, यद्यपि यो एक धेरै सुरक्षित शल्यक्रिया हो, यो साइड इफेक्ट बिना छैन। जसको पनि कदर हुनुपर्छ । आफूलाई सधैं राम्रो हातमा राख्नुहोस्, सबै शंकाहरू समाधान गर्नुहोस्। केहि समय छोड्नुहोस् जसमा तपाइँ प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुहुन्छ र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ कहिले, कसरी र कोसँग सदाको लागि दृष्टि समस्याहरू हटाउन शल्यक्रिया गर्न चाहनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » रोगहरू » अपवर्तक शल्यक्रिया के हो?